ESI GBANWEE ADREESỊ MAC NKE RAWỤTA - NETWORK NA INTANETI - 2020
Maka m, ọ bụ akụkọ banyere ịmara na ụfọdụ ndị na-eweta Ịntanetị na-eji MAC ebuchi ndị ahịa ha. Nke a pụtara na ọ bụrụ na, dịka onye na-enye gị ọrụ, onye ọrụ a ga-enwerịrị Ịntanetị site na kọmpụta nwere adreesị MAC ọ bụla, nke ahụ bụ, dịka ọmụmaatụ, mgbe ịzụtara ihe ntanetị Wi-Fi ọzọ, ịkwesịrị ịnye data ya ma ọ bụ gbanwee MAC adreesị na ntọala nke rawụta ya.
Ọ bụ banyere mbipute ikpeazụ nke a ga-atụle na ntuziaka a: ka anyị lebakwuo anya iji gbanwee adreesị MAC nke rawụta Wi-Fi (n'agbanyeghị ihe nlereanya ya - D-Link, ASUS, TP-Link, Zyxel) na ihe ọ ga-agbanwe maka. Hụkwa: Otu esi agbanwe adreesị MAC nke kaadị netwọk.
Gbanwee adreesị MAC na ntọala Wi-Fi
Ị nwere ike ịgbanwe adreesị MAC site n'ịga na ntanetị weebụ nke onye na-agbanye router, ọrụ a dị na ibe ntọala Ịntanetị.
Iji tinye ntọala rawụta, ị ga-ebido ihe nchọgharị ọ bụla, tinye adreesị 192.168.0.1 (D-Link na TP-Link) ma ọ bụ 192.168.1.1 (TP-Link, Zyxel), wee banye nbanye nbanye na paswọọdụ (ọ bụrụ na ị gbanwere n'oge gara aga). Adreesị, nbanye na paswọọdụ iji tinye ntọala bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na labelụ na router ikuku n'onwe ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe akara adreesị MAC n'ihi na m kọwara na mmalite nke akwụkwọ ntuziaka (ejikọta ya na onye na-eweta ya), ị nwere ike ịchọta isiokwu Otu esi chọpụta adreesị MAC nke kọnet netwọk kọmputa ahụ, n'ihi na ị ga-ezipụta adreesị a na ntọala.
Ugbu a, m ga - egosi gị ebe ị nwere ike ịgbanwe akwụkwọ a na ụdị ụdị Wi-Fi. Achọpụtara m na ọ bụrụ na ịmebe, ị nwere ike ịchọta adreesị MAC na ntọala, nke a na-enye bọtịnụ kwekọrọ n'ebe ahụ, mana m ga-akwado ịdebe ya site na Windows ma ọ bụ tinye ya na aka, n'ihi na ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ngwaọrụ jikọtara site na interface LAN, adreesị ezighi ezi nwere ike depụtaghachi.
Na D-Link DIR-300, DIR-615 na ndị ọzọ na-emegharị ụzọ, na-agbanwe adreesị MAC dị na "Network" - "WAN" (iji nweta ebe ahụ, na ntanetị ọhụrụ, ịkwesịrị ịpị "Ntọala Ntọala" n'okpuru, na ndị okenye - "Nhazi ntuziaka" na ibe isi nke interface weebụ). Ịkwesịrị ịhọrọ njikọ Ịntanetị ejiri mee ihe, ntọala ya ga-emeghe ma nọrọ n'ebe ahụ, na mpaghara "Ethernet", ị ga-ahụ "MAC" ubi.
Na ntọala Wi-Fi nke ASUS RT-G32, RT-N10, RT-N12 na ndị ọzọ routers, ma ndị ọhụrụ na nke ochie firmware, iji gbanwee adreesị MAC, mepee ihe ntanetị Internet na mpaghara Ethernet, jupụta ọnụahịa MAC.
Na TP-Link TL-WR740N, TL-WR841ND Wi-Fi ndị na-eme njem na ndị ọzọ dị iche iche nke otu ụdị ahụ, na ibe ntọala nke dị na aka ekpe, mepee Ihe Network, wee "nchịkọta adreesị MAC".
Iji gbanwee adreesị MAC nke Zyxel Keenetic rawụta, mgbe ị banyere na ntọala ahụ, họrọ "Internet" - "Njikọ" na menu, wee banye "Jiri adreesị MAC" họrọ "Tinye" na n'okpuru dee ọnụọgụ nke adresị kaadị netwọk kọmputa gị, wee debe ntọala ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Network na Intaneti 2020